ZIYIUI 22inch / 55cm Kuberekwazve ...
ZIYIUI 22 Inch 55 CM Chaiyo L ...
ZIYIUI 18 48 CM Akazvarwa Mwana ...
ZIYIUI20 50 CM Muviri Wese S ...
ZIYIUI Yakagadzirwa nemaoko Nyoro Silico ...
ZIYIUI Yakagadzirwa Nemaoko Nyoro Silicone18 inch Kuberekwazve Kwevana Mwana Musikana Hupenyu Hupenyu hweBlue Eyes Mucheche Musikana Toy Toy Iyo Inotarisisa Chaiyo YeVana Vinyl Yekuzvarwa Chipo.
Kukura kwedhora: 18 inches
ZIYIUI Chaicho 22 inch 55cm Kuberekwazve Kwecheche Dhora Nyoro Vinyl Silicone Kutaridzika Kwechokwadi Kurarama Mucheche Wakagadzirwa Hupenyu Hupenyu hweBhuruu denim rokwe rokwe
.Iye chidhori chichauya neine magnetic pacifier uye bhodhoro rekudyisa rinokwana muromo
Chinyorwa: silicone vinyl musoro, 3/4 silicone vinyl mitezo ine yakashongedzwa PP donje muviri, yakapfava zvinyoro nyoro kubata. Haikwanise kupinda mumvura kugadzira shawa.
Maziso: Taiwan's epamusoro-giredhi acrylic maziso, maziso haazobhenekera.Hair:High Quality Mohair, Manual kuisirwa, inogona kushamba uye kupfeka kumusoro.
Chengetedzo: Inoenderana neyakachengeteka zvinodiwa zveASMM F963 uye EN71 yemakore matatu+
Tsananguro yechigadzirwa: Ichi chidhori chakakwana chakazvarwa patsva chakagadzirwa neakakurumbira muimbi.Cute uye akafanana nehupenyu akaberekwazve mudhori.Made yemhando yepamusoro Soft Simulation Silicone Vinyl.Comfortable touch.Safe isiri-chepfu, yakachena nharaunda fri.
ZIYIUI 22 Kuberekwazve Kwevacheche Musikana Dhiri Achangozvarwa Vacheche Madhora Chaiwo Silicone Vinly Vacheche Doll Yekuzvarwa Zvipo.
silicone musoro uye mitezo, ine yakapfava kotoni jira muviri kune chaiwo mwana anzwe, saka vana vanogona kumutambidza iye kwese kupi.
Ruoko rwakaiswa maziso ebhuruu & eyelashes uye ruoko rwakadzika midzi mohair, maoko nemakumbo zvinogona kusimudzwa kumusoro uye pasi, chinonakidza chiso chinoita kuti vana vako vanzwe sekubata uyu mudhori shamwari.
CHIKURU CHOKWADI - Chipo chekuzvarwa, chipo cheKisimusi, Chiito chekuchikoro, Basa repamba, Kutamba, Kutamba kutamba, imi vana muchawana kugona munharaunda uye kugona kugona kugona.
CHITSAUKO CHOKWEDZESA - Inoenderana kana kupfuudza izvo zvidziviriro zveASM F963 uye EN71 zvemazera matatu, izvo zvakachengeteka kuvana vako.
Tsananguro yechigadzirwa: Ichi chakanakisa chidhori dhizaini yakagadzirirwa neakakurumbira muimbi.Cute uye akafanana nehupenyu akaberekwazve mudhori.Yakagadzirwa yemhando yepamusoro softsilicone.Comfortable touch.Safe isiri-chepfu, yakachena nharaunda zvine hushamwari zvinhu.
Biracial Yakaberekwazve YeMwana Mwana Mutema Mutema wemuAmerican Musikana 22 masendimita Prime Cute Chaiwo Checheche Checheche Ganda Revana Vana Matoyi
Hupenyu hwakafanana nekuzvarwa patsva mwana mudhiragi wakagadzirwa uye wakagadzirwa nemaoko neNPK muimbi, yakanyanya kutsanangurwa uye yakanakisa, silicone-senge vinyl zvinhu zvinoita kuti mwana awedzere kuitika.
Kukura: 22 inches / 55cm kubva kumusoro kusvika kumagunwe, Chinyorwa: Vinyl silicone zvinhu zvemusoro, 3/4 makumbo,
Bvudzi: kupinza mohair yakachena, yakadzurwa neruoko tsono uye tsono, maburi emudzi webvudzi anoonekwa, chaizvo, Bvudzi rinogona kuumbwa mushure mekugeza uye kuomesa zvakasikwa.
30-zuva rekudzoka garandi, rakakodzera ruzivo rwekutevera, maawa makumi maviri nemaviri basa revatengi netsamba. isu tine stock muUSA 7-10 zuva rekushanda rekutakura.
Tsananguro yechigadzirwa: Vinyl silicone zvinhu zvemusoro, 3/4 mitezo, Inoenderana neyakachengeteka zvinodiwa zve EN71 EU standard yemazera 3+. nyoro silicone vinyl zvinhu seganda chairo. Muviri muviri wemachira. Kuzadzwa nePP c
ZIYIUI 23 Yakazara Muviri Silicone Vinyl Kuberekwazve Dhiza Hupenyu Kufanana neAnatomically Kururamisa Mwana Wevasikana
23 inch (57cm) saizi ichangozvarwa. Kurema: anenge 3.5LB. Iyo chidhiraini inosvika iine magnetic pacifier uye yekudyisa bhodhoro
Chinyorwa: Muviri uzere ndeweSimulation Silicone Vinyl.
Bvudzi: Yakakwira mhando Mohair, Kuisirwa kweManyorerwo, inogona kusuka uye kupfeka.
Ichi chidhori izere nemuviri wakasarudzika musikana musikana dhori.
Tsananguro yechigadzirwa: Ichi chidhori chakakwana chakazvarwa patsva chakagadzirwa nemunyanzvi ane mukurumbira.
ZIYIUI 22 Inches Yakaberekerwa Mwana Dhiza Yakagadzirwa Lifelike Sevacheche Vacheche Mwana
Tsananguro yechigadzirwa: Inotaridzika kunge yechokwadi, hupenyu hwakafanana nehucheche kubva pachiso chayo chisina kusimba kusvika kutsoka dzayo diki. Iye anouya kunyange aine huremu hwakapfava jira muviri, kune anonyanya kuita seupenyu paunomumbundira.
ZIYIUI Chaiye Kutarisa 18 inch Kuberekwazve Kwevacheche Madhora Akazara Muviri Silicone vinyl Chaizvoizvo Kuberekwazve Kwemwana Mukomana Chaiye Achangozvarwa
, madhiraizi akagadzirwa nemaoko saizi uye huremu unenge wakanganisa zvishoma.Mwana ane rakazara rakapfava vinyl muviri. Muviri uye chiso chinonakidza chinokuita kuti unzwe sekubata kwako mwana chaiye.
Chinyorwa: yakazara muviri silicone vinyl, inogona kutamba zvakachengeteka nedhongi mubhavhu, chidhori chakanyorovera; zvidhori zvidhori zvinogona kuve zviitiko, zvinogona kugara zvinogona kunyepa, iwe unogona kupinda mumvura; haimire, haigoni kutaura.
Maziso: Dhori nemaziso akavharwa, maziso haagone kuvhurika.Doll ine magnetic pacifier inogona kukodzera muromo.
Zvipfeko: zvakagadzirwa nemaoko. Zvinoenderana nesaizi yechidhori. Inokodzera muhukuru huchangozvarwa (s 0-3 mwedzi) hembe dzemucheche Chidhori chichauya nembatya sekuratidzwa kwemufananidzo.
Tsananguro yechigadzirwa: ZIYIUI akazvarwa patsva mucheche chidhori chakagadzirwa nevanyori. Yese inchi yeiyi yakaita seupenyu mucheche chidhori yakagadzirwa nemaoko, yakapendwa neruoko.Ganda ndiyo nzvimbo yakasarudzika yedhori, nguva yakawanda inopedzerwa pane yemwana
Kuberekwazve Mucheche Dhora Nyowani Simulation Silicone Vinyl Cloth Muviri 22inch 55cm Hupenyu hwakafanana Mukomana Musikana Toy
Chidhori chakagadzirwa nemaoko, chichava chakasiyana mukukura uye huremu.
Musoro, maoko nemakumbo: Soft simulation silicone vinyl, Muviri: Mucheka wakazadzwa nedonje, wakapfava kwazvo.
Bvudzi: Yakakwira Hwakanaka Mohair, Manual kuisirwa, inogona kugeza nekupfeka.Ichi chidhori chemucheche, saka vhudzi iri shoma.Doll Clothing: Yakagadzirwa nemaoko.Yinokwana 0-3 Mwedzi ichangoberekwa mucheche mbatya.
Customizable, ndapota tumira meseji kana ichida chero Yakasarudzika sevhisi.Conforms kune chengetedzo zvinodiwa zveASM F963 yeMazera 3+.
Tsananguro yechigadzirwa: Ichi chakanakisa chidhori dhizaini yakagadzirirwa neakakurumbira muimbi.Cute uye akafanana nehupenyu akazvarwa patsva chidhori.Made yemhando yepamusoro Soft simulation silicone vinyl.Comfortable touch.Safe isiri-chepfu, yakachena nharaunda
ZIYIUI Yakagadzirwa Nemaoko Nyoro Silicone 18 inch Kuberekwazve Kwevana Mwana Musikana Hupenyu Hwakaita Bhuruu Maziso Achangoberekwa Musikana Toy Toy.
Iyo chidhori chakagadzirwa nemaoko, ichave imwe kukanganisa muhukuru uye huremu.
Tsananguro yechigadzirwa: Akanaka uye akafanana neupenyu akaberekwazve mudhiraini Yakagadzirwa yemhando yepamusoro Soft Simulation Silicone Vinyl. Kugadzikana kubata. Yakachengeteka isina-chepfu, yakachena nharaunda zvine hushamwari zvinhu.
Rebron Mwana Wechidhori 22 Inch Akanaka Hupenyu Hwakaita Kuberekwazve Mukomana Doll
Chidhori chichauya nembatya. Hembe dzakagadzirwa nemaoko Zvinoenderana nesaizi yedhori. magnetic pacifier inogona kukodzera muromo.
Bvudzi: Yakagadzirwa nemaoko yakadzika midzi mohair, Kuchengetwa kwebvudzi, bvudzi rekuchengetedza mvura kana mvura, zvinyoro muzinga, Inogona kusuka nekupfeka.
Maziso: akakwira-giredhi acrylic maziso. Mhuno: mhino dzakavhurika, sekunge mwana mucheche ari kufema. Muromo: iyo miromo inoita kunge miromo yemwana mucheche, yakapfava, yakapfava, inodziya uye ine hunyoro, haugone kubatsira asi kuda
ZIYIUI 24 Kuberekwazve Kwevacheche Vacheche Lifelike Silicone Nyoro 60 CM Musikana Mucheche Mwana Vinyl Vana Chipo Kisimusi Xmas
Kurema: 1.82 Kg
Kukura kwedhora: 24 inches
18inch 45 CM vacheche vanozvarwa patsva mwana mudhori mukomana
akazvarwa patsva mwana mudhori yakagadzirwa nevanyori. Yese inch yemwana uyu yakaita sehupenyu mucheche unogadzirwa nemaoko, wakapendwa neruoko.
Musoro, 3/4 maoko uye 3/4 makumbo akagadzirwa nezvinyoro silicone vinyl zvinhu. Bendekete nemuviri muviri wejira newemukati kuzadza PP donje.
Vhudzi ruoko rwakadzika midzi mohair (jira rakagadzirwa kubva kune bvudzi chairo reAngora mbudzi). Bvudzi rinogona kuve chero chimiro uye rakagadziriswa, kungofanana nebvudzi chairo remwana.
akazvarwa patsva mucheche mudhori Toy akaedzwa neSAFE ASTM F963 uye EN71 yevana vane makore 3+.